Idiski enzima igcwele? Uyonyusa njani indawo kwi-hard drive yam. | Iindaba zeGajethi
HMolo, namhlanje siza kubona ikhompyuter esisiseko yokunyusa indawo ekhoyo kwidiski yethu ngaphandle kokukhupha nantoni na. Andazi ukuba uyazi ukuba njengokuba sihamba kwaye sisebenza kunye nekhompyuter, idiski enzima igcwalisa ngeefayile ezininzi ezingeyomfuneko ezithatha indawo engenamsebenzi.
UEzona zinto zixhaphakileyo zokuqokelelwa kwenkunkuma kwikhompyuter yakho kukukhuphela iifayile ezingaphelelanga. Umzekelo, ukuba uqala ukukhuphela inkqubo kwaye uvale umkhangeli embindini wokukhuphela, eyona nto inokwenzeka kukuba ifayile engaphelelanga iya kugcinwa kwihard drive yakho, ithathe indawo kwaye ingakusebenzisi kwaphela. Uya kumangaliswa kukwazi ukuba yeyiphi indawo enokulahleka ngenxa yoku, cinga ukuba singafumana neendawo ezilahlekileyo.
PUkunciphisa oku kuchithwa kogcino kancinci, singasebenzisa isixhobo senkqubo yokusebenza yeWindows XP ebizwa ngokuba Ukucoca iDisk«. Ngesi sixhobo singacima iifayile zethutyana, sicoce umgqomo wokuphinda usebenzise kwakhona kunye nezinye izinto ezininzi kubandakanya ukucima zonke iinkqubo zokubuyisela amanqaku ngaphandle kwale yokugqibela.
SUkuba ufutshane kwisithuba kwi-hard drive yakho kwaye ufuna ukwandisa amandla ayo, uya kuba nomdla wokufunda le ncwadana ilandelayo.
1) Ukuvula isixhobo se "Disk Cleanup" kufuneka ulandele le ndlela ilandelayo.
«Qala / Zonke iiNkqubo / Izixhobo / Izixhobo zeNkqubo / Ukucocwa kweDiski»
2) Ifestile ekhethiweyo yediski ekhulayo iya kuvula apho kuya kufuneka ukhethe ukuba yeyiphi na idiski ofuna ukuyicoca. Khetha enye kuzo kwaye ucofe ku "Yamkela" iqhosha.
Ifestile ekuthiwa yi "Disk Cleanup" iya kuvula ihlalutye le diski ukuze ikwazi ukucinywa kwaye ingakanani indawo enokukhutshwa kwidiski ekhethiweyo. Le festile inye iyakulumkisa ukuba ukusebenza kungathatha imizuzu eliqela, yonke into iya kuxhomekeka kubungakanani be-hard drive nakwisantya seprosesa yekhompyuter yakho.
3) Xa uhlalutyo lugqityiwe, "Ukucocwa kweDiski (apha kuya kuvela ileta yediski ekhethiweyo)" iwindow iya kuvula ngokuzenzekelayo. Kule festile uza kufumana iithebhu ezimbini ezibizwa ngokuba yi "Disk Cleanup" kunye "nezinye iinketho". Kule ncwadana siza kugxila kwithebhu yokuqala kwaye siza kubona ukuba sinokumisela ithebhu yesibini kwenye isifundo endiza kwenza kungekudala.
Ukuba ujonga umfanekiso ongentla, kukho ibar ethe nkqo onokuthi uskrole kuyo uluhlu apho kuya kufuneka ukhethe ukuba yeyiphi iifayile oza kuyicima. Olu luhlu lunamacandelo alandelayo:
Ikhutshelwe iifayile zeenkqubo: Nazi ezinye iinkqubo ozikhuphelayo xa usebenzisa i-Intanethi, ezinje ngolawulo lwe-ActiveX ekufuneka ikhutshelwe ukusebenzisa i-antivirus ekwi-Intanethi.
Iifayile ze-Intanethi zexeshana: Igama layo lithetha konke, imifanekiso kunye neefayile zigcinwa apha xa ukhangela kwiWebhu ukuze ukufikelela okulandelayo kukhawuleze ukulayishwa kwamaphepha.
Amaphepha ewebhu angaxhunyiwe kwi-intanethi: Ukuba ukhetha ukukhetha ukukhangela ngaphandle kweintanethi, iifayile zamaphepha ewebhu owandwendwelayo ziya kugcinwa apha ukuze ukwazi ukuwajonga kamva ngaphandle kokuqhagamshelwa kwi-intanethi. Ukuba olu khetho luvuliwe unokufikelela kubungakanani obukhulu.
Imgqomo wokuphinde kusetyenziswe: Ukujonga le bhokisi kuya kukhupha umgqomo wokuphinda usebenzise. Khumbula ukusoloko uyikhupha phambi kokucima ikhompyuter, ngale ndlela uyakukhusela imfihlo yakho kwaye uncede ukwandisa isithuba kwidiski enzima.
Iifayile zethutyana: Ezinye iinkqubo zigcina okwethutyana ulwazi ngaphakathi kweefayile kwifolda ye-TEMP. Xa uvala inkqubo, kuqhelekile ukuba olu lwazi lucinywe, kodwa ukungakhutshwa okanye iinkqubo ezingacwangciswanga kakuhle kunokushiya iifayile eziqokelelweyo kule folda.
Umshicileli weWebhu yaBathengi / Iifayile zethutyana: Ezi fayile zithatha indawo encinci kwaye zinxulumene neWebDADA protocol esetyenziselwa ukuguqula iifayile ze-Intanethi ukude ngayo.
Cinezela iifayile ezindala: Inkqubo yokusebenza ikhangela iifayile ezingasetyenziswanga ixesha elide kwaye Ukuxinana ukugcina ubungakanani bediski. Ayizukuzicima, ziya kuhlala kwihard drive yakho kwaye ungafikelela kuzo.
Iifayile zeKhathalogu ye-Index Indexer: Ezi ziifayile ezisaleleyo zivela kwisalathiso sangaphambili somsebenzi. Ngamanye amagama, ziifayile ezingasasetyenziswanga kwaye bezisetyenziselwa ukukhawulezisa ukukhangela iifayile yiNkonzo yokuKhangela.
Aixesha osele ulazi ukuba leliphi icandelo ngalinye, ukuba unguye umsebenzisi ongenamava Kwikhompyuter, jonga iibhokisi ezimbini zokuqala (iifayile ezikhutshelweyo zeefayile kunye neefayile ze-Intanethi zethutyana). Ukuba uyi umsebenzisi onamava Funda olu lwazi lungentla kwaye ulusebenzise xa ukhetha iibhokisi oza kuzijonga xa ufuna ukuzicima. Xa iibhokisi ezikhethiweyo ziphawulwe, cofa kwindawo ethi "Yamkela". Uya kufumana ifestile yesilumkiso kuwe ukuze uqinisekise isenzo. Cofa ku "Kulungile" kwakhona kwaye iifayile ezikhethiweyo ziya kucinywa. Kude kube ngu-step-by-step tutorial olandelayo, malunga ne-vinegary ngokubhekisele.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Idiski enzima igcwele? Uyonyusa njani indawo kwi-hard drive yam.
Izimvo ezi-69, shiya ezakho
Kwenzeka ntoni kwiifayile ezixineneyo endingenakubona kwakhona? Ndingazicima njani kwikhompyuter yam?
farandulero llanero sitsho
Ndiyabulisa, kulungile kakhulu, le post yandise ulwazi endinalo ngale nto, ngaphambi kokuba ndiyenze kodwa bendingazi ukuba yenzelwe ntoni, ngoku ndifunda eli nqaku ndiqonda ngcono kwaye indenze ndaluncedo kuba ndisengxakini i-dosco yam enzima kuba sele igcwele kwaye andazi ukuba ndenzeni kodwa ngale nyathelo ndikwazile ukufumana indawo thanksssssssssss kwaye ukuba uyazi ngelinye iqhinga lokuba nendawo engaphezulu undazise
Phendula kwillanero ebethwe
molo .... andazi ukuba unayo into kwiphepha lakho ngokubhekisele kwindlela yokunyusa indawo phakathi kweeyunithi, kuba bandishiye kancinci ku-c kodwa kwabanye ndinendawo enkulu. Okanye ngaba kunzima kakhulu kumntu ongatshatanga ukuyenza?
Isabel, into ofuna ukuyenza inokwenzeka kodwa ubeka umngcipheko wokulahleka kwedatha kunye nolwazi. Akunzima kakhulu kodwa kufuneka ube nolwazi olungaphezulu kwesiseko sokulawula inkqubo yolawulo lokwahlula, nto leyo oya kuyidinga.
kodwa ndiyenzile yonke into endayifaka i-gunz yayine-400mb kodwa yabuyela kwi-170mb kwaye xa ndiyisusayo bandinika kuphela i-80mb ngaphezulu
Ngoku ndine-233mb kuphela yoncedo pls apha ndishiya i-msn yam
Xa ndilandela amanyathelo xa ndichukumisa izixhobo, ukhetho lwe-LIBERATING DISK SPACE aluveli, ungandinceda. Enkosi.
Kwenzeka into efanayo kum njenge-lucia, ndine-XP kodwa ayiphumeli ...
Uxolo, wenza njani malunga nokwandisa i-hard drive?
eli phepha lindincede kakhulu, enkosi kakhulu
Andifuni ukucima iifayile kwaye ndinendawo ethe chatha ………
Molo, ndifuna ukutshintsha indawo ku-c, ndiyandise kwaye ndinciphise indawo kwi-discolocal d, enkosi
Ndifuna ukurekhoda ividiyo ngenkqubo ye-nero, kwaye andinakuyenza kuba icela i-4.000 mb yeefayile zethutyana kwaye ndine-3.000 mb. Sele ndicinezelwe, ndicoce idiski kodwa andikwazi ukwandisa umthamo weefayile zethutyana. Ndingasinyusa njani isithuba seefayile zetemporaels? Enkosi
Ndinengxaki, jonga ikhompyuter yam zininzi iimpazamo zekhompyuter kodwa azisebenzi kum kodwa ibinama-512 mb kodwa ngoku endaweni yayo kubonakala ngathi ndinama-448 mb, ndingenza ntoni?
Ngokuqinisekileyo ndiyithathile kodwa endaweni ye windows xp yobungcali kuhlelo lwasekhaya
Xa ndiyifomatha andisakwazi ukudlala imidlalo efuna uncedo lwe-512 mb !!!!
Sele ndiyizamile kwaye yandikhulula i-8 gb !!!, kodwa, kuya kubakho enye indlela ngaphandle kwale ukuya kwi-isibindi kunye / okanye ukwandisa indawo yediski. Nceda, ukuba unayo impendulo, ndiphendule: esteban700@hotmail.com.
Buza ikhompyuter yam, ndifuna ukwandisa umthamo wekhadi levidiyo, andazi ukuba iyakwazi? kukuba ndifuna ukuphuma kwindawo yokudlala station2 enomzami wokulungisa kuba ndinayo kodwa iphuma icotha kakhulu
tbn Ndifuna ukwandisa i-RAM iye kwi-2 GB andazi ukuba iyakwazi na .. ..
Phendula kwi do.0n
Enkosi kakhulu indincedile kakhulu ngoku ndinendawo engaphezulu yediski
IMarco Velado (i-El Salvador) sitsho
Enkosi kakhulu… .. undigcinele ixesha elininzi ngale ngcaciso.
Phendula uMarco Velado (El Salvador)
Khuphela i-tuneUp Utilities 2009, ikhulula i-hard drive yakho ngemizuzwana ngonqakrazo, sisixhobo esihle kakhulu, ndiyacebisa ... salu2
Kwenzeka ukuba phantse yonke imihla ndenza inkqubo oyichaze apha ngasentla, nangona kunjalo ndinama-62 mb, akukho nto yona kwaye ndiyayichitha i-pc phantse yonke imihla. Izolo khange andivumele ndigcine ifayile ephumeleleyo ngenxa yokunqongophala kwendawo kwaye ndicinga ukuba yintsholongwane okanye enye into kuba njengoko ndicima iifayile kunye neefayile ezininzi, ndiyakwazi ukwenza isithuba kwaye kuthatha indawo encinci ngalo lonke ixesha Ndiyayigcwalisa.
Kananjalo xa uyivula ithatha ikhilo, kubonakala ngathi iifayile ezininzi ziyavulwa, ndibambe i-antivirus engama-32 kunye ne-spyware.
Undixelela ukuba ndicime iinkqubo, kodwa ndazi njani ukuba zeziphi iinkqubo ezinokususwa ngaphandle kokucima iinkqubo ezivela kwi-pc? Enkosi!
Olona khetho lulungileyo lokunyusa isithuba sediski, ukuba nje banezahlulelo ezongeziweyo zisahlulelo saseNorton uMlingo 8, ikuvumela ukuba ungeze indawo eyongezelelweyo kwi-C yakho yediski kwezinye iiyunithi ezikwidiski yakho, ngaphandle kokulahla idatha nakuluphi na ulwahlulo.
Ndiyathemba ukuba ndincede kancinci
Molo kodwa uyazi ukuba ndingathanda ukwazi ngakumbi malunga neenkqubo eziza kuchaza i-kiierO ondicacisela yona ngcono ngayo, imalunga nenye nganye ii kuba ichaphazela ukususwa nokuba ayichazwanga nceda
Molo Josefa, jonga, ndingakunceda kodwa andizukuzinikezela ekwenzeni uluvo olukhulu ukuba ufuna ukukunceda inyathelo ngenyathelo okanye ukuba unamathandabuzo, ndiyazinikela kubafana, ndinolwazi olubanzi 😉
msn yam yiyo LOOKOMAAN@HOTMAIL.COM
OKUBALULEKILEYO: XA UNDONGEZA, HLAWULA XA UZOKUNDITUMELA ISIMEMO ESITHI "ANDIQONDI INDLELA YOKWANDISA ISantya SOKUQHUBA KWAM KANZIMA" YITHI NGOKO NJE NDIYAZI UKUBA NGUWUPHI UMNTU ONDONGEZAYO NDIBABEKE KWICANDELO 😉
NDIYASHIYA KWAM I-MSN YAM KWAKHONA BONKE ABANTU ABAFUNA U-ALUDA 😉
Molo mdala ndiyathemba ukuba ufundile lo myalezo, kuba ndiyabulela kakhulu ngentlawulo ukuba ndingadala enye kwaye undidlulise andicaphuki ixhegwazana, kwaye ndaqhubeka ukuze umbono olinikayo ulungile ukuze umntu afunde Kulungile kwaye ayithathi shit njengalowo uthi ajajajja kulungile ndiyakushiya tishala ,,,,,,,,,,,,, kwaye ezinye zejacker nazo zinomdla kum ukuba uyazi amanye amaqhinga ungandixelela ukuba uwufumene phi kwaye wenze ntoni uphambene namaqhinga onawo ,,,,,, ,, kulungile nje jorge ,,,,,,,,,,
Enkosi ndoda, ndizama ukufumanisa izinto, ngequbuliso iidiski zam zahlulwa kwaye ibiyingxaki, kwaye ndihlala ndisebenzisa i-Local Disk C, hayi i "D", ke indikhathalele konke !!
U-erick david sitsho
Uxolo ngokungalungisi, ndingasinika njani indawo engaphezulu kwikhompyuter yam, inyani kukuba, andinanto ngaphandle kwe-msn, sele ndiyicocile nge-echo liberator, nditsho nangeccleaner, kodwa ubukhulu becala indinika indawo engama-201MB xa kunzima Idiski eyi-9.2GB ndincede ndicela uncedo
Phendula u-erick david
Mc DELTA sitsho
NDIYAFUNA UNCEDO NGENXA YOKUBA KE KWI-COMPY YAM UKUKWAZI KWEDISKI YASEKUPHANDLENI C NGAPHANDLE KOKUBA KE NDISUSE INTO NGU-FAS CHIDO NDILINDE IIMPENDULO
Phendula Mc DELTA
Hee, ucinga ungandinceda? Into endiyifunayo kukunyusa amandla e-kpacity kwifolda yeefayile zethutyana, ndiyathemba impendulo yakho enkosi
Molweni zihlobo, umntu, ndingakuxelela ukuba usifumana njani isithuba kwidiski c xq I diski c ine 20 GB KUNYE KWIDISKI ENDINAYO IMENSSEGER KUNYE NE-ATOMIX ENGANALUTHO OLUNYE KUNYE NDINGENAKUKHUMBULA. ANDAZI Q NDISUSE XQ UKUBA NDISUSE INTO KANYE NOMNTU OTHUNYIWEYO. U-ENSIMA NDIMISELE KWIZIXHOBO ZENKQUBO kwaye AKUVUMELEKI KWISIKHALA ESIMAHLA KWIDISKI UKUBA UMNTU UFUNA UKUXELELA INTO OKANYE ANDIBONISE APHA NDIYASHIYA I-MSN YAM
Ndikhulule njenge-950 kb jupi
Molo, jonga, ndizamile le nkqubo amaxesha ama-0 kodwa andifuni kwanto ukuba uyazi ukuba ndimele ndiyibhalele apha (ndinike impendulo) kwakamsinya nje ukuba ayifunde, enkosi ngayo yonke into 🙂
i-virginia saffotn sitsho
hey le intle kakhulu indikhonze… .grax
Phendula i-virginia saffotn
Molo, NDITHANDA UKWAZI ENDINOKUKWENZA, NGOKUBA "I-DISK SPACE LIBERATOR" AYIBONI KUM ... KANYE UKUBA NDINESINYE ISISOMBULULO: S
Kwenzeka ntoni ukuba andinandawo kwidiski yam yokubuyisa (F) kwaye andazi ukuba ndingasifumana njani isithuba, sele ndilandele le miyalelo ingentla, kodwa andizukufumana ndawo, ungandinceda ndibuyise eyam isithuba nceda ...
Undikhonze ngokwenyani le enkosi kakhulu !!!!!!! ayikho enye into ngaphandle kokubulela ... Ndiyazi kuphela iziseko malunga ne-pc kwaye le nto yeza kum njenge glavu !!
Ndine 500 hard disk, kwaye zisasazwa ngolu hlobo lulandelayo: kwi-C 166 Gb, D 156 Gb kunye no-E 145.
Ndifuna ukwazi ukuba uphi umahluko we-33GB
Ndinepc ene-160 gb disk kwaye ipowusta ibonakala kum isithuba esincinci kwidiski xa ndisiya kwikhompyuter yam, kubonakala ngathi umzobo okwimo yesangqa ugqibekile, uhlala uphelele kwinani lama-75 gb ndilahlekile ngama-75 gb andazi ukuba baphi? enkosi
Enkosi ngeli galelo, mhlobo olungileyo, enkosi, lisebenze kakuhle kakhulu kum ……
kwi libero yam 55gb yupiiii yupii besele ndigula ndingakwazi ukukhuphela ngenxa yokunqongophala kwendawo enkosi mhlobo ndiguqe phambi kwakho hahahahaha. sala kakuhle
Enye indlela yokukhulula isithuba kwidiski yekhowudi (kuxhomekeke kwindlela abahlule ngayo) kukuya kwi-pc yam ukucofa ngeqhosha lasekunene lempuku, apho kwicandelo elisezantsi uzakubona iipropathi, cofa apho kunye nebhokisi yencoko ukuvela apho ikhoyo nendawo yokucoca indawo yediski, nje ukuba kwenziwe oku banokulungisa iimpazamo kwidiski apho ithi IZIXHOBO apho banokujonga imeko yediski kwaye ukuba kukho ukusilela abangayilungisa, oku kuya kwenziwa kumacandelo ama-5 kwaye ukuba bakhetha iibhokisi baya kubona Apho kuya kuvela isaziso sokuba umsebenzi awunakwenziwa kodwa ukuba izixhobo ziya kuwenza xa sele bewuqala ngokutsha okanye bewuvula kwakhona, ndikufundile oku njengoko besitsho kwintlawulo yam, nje mbi, imibuliso
Ndenze into ngokwendlela eya kundikhuphela indawo kwidiski yam c kodwa xa ndicima ipc yam ndayijika ngosuku olulandelayo isikrini sokuqalisa singaveli, kwavela iBOOTMGR. I-CTRL + ALT + DEL ngokwe-pos andikwazi ukungena kwi-pc yam ngoku kufuneka ndiqale kwakhona windows vista hahaha bayazi ukuba bangazami ukukhulula izithuba ngaphandle kokuqala bazi ukuba zeziphi iifolda onokuzicinezela ukubulisa
Molo! Iifayile zethutyana kunye nezifakelo ezithunyelwe nge-imeyile ziya kwiifolda ezahlukeneyo njengoko ndizicima nceda uphendule kuzo c.cas60@yahoo.com.mx I gracias
Ndisebenzisa izixhobo zokulungisa izinto ngo-2010 kwaye ndikhulula indawo endikuyo
UPERLA LIZETH NUÑEZ HERNANDEZ sitsho
hayi pz olu lwazi kum lundikhonze njengombulelo wemosi
Phendula u-PERLA LIZETH NUÑEZ HERNANDEZ
I-perla lizeth nuñez hernandez sitsho
Indincedile ukuba ndingaphumeleli kulungelelwaniso.Ndiyabulela, kulungile ukufumana iphepha elinolwazi olucace gca nangokuchanekileyo ngaphandle kokulwa
Ikhompyuter yam ithatha ixesha elide ukukhulula indawo, kutheni le nto: S: S? Ndicela uxolo ngokungaqondi kwam eliwaka ngobuqhophololo (^ ^) atte: Astaroth
Ndinomntu ondincedayo.Ndineefestile xp zobungcali ze-ue service pack 2 kwaye ayizisi "disk space cleaner", ndingenza ntoni ukukhuphela okanye ndenzeni?
Ndidinga uncedo kungekudala ndaphelelwa yindawo kwi-dico yam kwaye ndifuna indawo ngokukhawuleza Uncedo?
Ulwandle .... sitsho
Molo, kulungile xa uchaza ngaphandle kokufuna.Ndiyenzile ngaphambi kokuba ndikubone apha, umba kukuba ndithumela kwifomathi yepc yam ngaphambili; Ndiyithumele inyama yehagu, intombi yam ibingazi ukuba ivule ntoni kwaye ibemnyama, nokuba ngubani oyenzileyo wayizisa ngenkqubo eyothusayo enyanisweni xa ndidibanisa inqaba bendingenayo indawo yokungena kwi-intanethi lo mntu weza wayenza ngeselula Ndishiye i-chrome efakwe apho ndadibanisa ndizama ukungena kwi-intanethi (enye ene-e) kwaye iyandixelela ukuba akukho kungena, andazi ukuba yintoni le ndingakhange ndiyifakele umthunywa, ares okanye ezinye iinkqubo ebesele ndinazo, ngalo lonke ixesha ndizama ukuyikhuphela Iyandiphika ukhetho lokutyhola iingxaki kwi-tooblar kwaye umthunywa undinika amanani kwi-GB nakwi-MB, eyam isezantsi kunaleyo yokukhuphela ... Andazi ukuba umcimbi uya phaya, yonke enye into iyasebenza ngaphandle kwento endinomdla kuyo ... kulungile, ndingayivuyela into yokuba undinika isandla ... kulungile, enkosi ....
Phendula kuMar ....
Umbulelo olunge kakhulu lo undincedile ngoku ndinendawo engu-985.562.251.455 ndingu sirbio
QAPHELA! XA UKUSUSA ISITHUBA KWIDISKI BAYOKUSUSA IIFAYILI abangasayi kukwazi ukubuyela kuzo. INGXAKI YEKHOMPYUTHA YAKHO OKANYE ISITHUBA. ICLEANER »INEENKQUBO EZININZI NEZOMSEBENZI EZIQHELEKILEYO ZONAKALISWE KANYE NENDAWO ENGAYIBUYEKEZA NGAPHANDLE KOKUNGONAKI IZIXHOBO ZAKHO
I-PS: NGOKUSUSA ISITHUBA KWIDISKI NE "SPACE LIBERATOR KWIDISKI", NGOKUQINISEKILEYO UNOKUFUMANA ISIKHALA ESININZI KUNYE NGOKUPHELELEYO UNGAKWAZI UKUFAKA IZINTO EZININZI, KODWA NJENGOKO IIVEKI ZIYA KUYA KUYA KUQINISEKISA UKUBA IKHOMPYUTHA YAKHO IYA KUCACA KAKHULU (ngakumbi xa uqala i-Intanethi Nokuba yi-mozilla okanye i-Chrome) NGAKHO NDIYAYICOMBISA UKUBA UFUNA UMATSHINI WAKHO ANGABE NEENGXAKI, UNGAYENZI INDLELA, UKUBA UNGAYAZI IZIPHUMO ONOKUBA NAKO KWIXESHA ELIZAYO.
Molo, andinayo loo nto ukuba ndinezixhobo kodwa enye ayithethi nto?
oh enkosi enkosi ngale ngcebiso bendisele ndiphambanisa nge-hard drive yam
Kuthathe ixesha elide ukuyiphumeza kodwa le ikhawulezayo ineenkqubo ezininzi ezingeyomfuneko
kwikhompyuter yam kuza i-xvr graxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Khange isebenze kum 🙁 ndikhathazeke kakhulu ibiyi-768 MB kwaye ngoku ithi yi-760 MB T_T
Ngoku ndiyayiqonda ukuba YASEBENZA KUM yeah xDDD
Ndilandele onke amanyathelo kwaye yandixelela ukuba ndiza kukhulula i-1GB kodwa emva koko ndijonge amandla afumanekayo kwaye ndisenayo encinci !!! Kweneke ntoni?
luis enrique sitsho
SIYABULELA NGAYO YONKE INTO ... UNEINKCUKACHA EZILUNGILEYO ... WENZA UTHIXO ANGABUSIKELELE UBUCHOPHO BAKHO NOKUTHANDA ... UTHIXO, UYEHOVA UMBHALI WABABHALI KWAYE ANGAKUNIKA UBUNINZI BOBOMI NEMPILO.
Phendula uLuis Enrique
molo, ngasendleleni, esi sixhobo siphume nakwiwindows 7 nakwivista, kunokwenzeka kakhulu ukuba siphume: qala zonke iinkqubo, izixhobo, izixhobo zenkqubo kwaye ayiveli
Kulungile ngaloo ndlela sazi okuninzi, kodwa kukho ezinye ophoswe ukuba uziqwalasele, kukho incwadi eneenkcukacha ebizwa ngokuba yi "temp" apho amaxesha amaninzi abantu bekhuphela iifayile okanye xa kuqhuba inkqubo kukho iifayile ezininzi zethutyana, amaxesha amaninzi ziyacinywa, kwiWindows 7 idilesi iya kuba yile: D: Abasebenzisi (igama lomsebenzisi) AppDataLocalTemp
KwiWindows xp: C: / amaxwebhu kunye nokuseta / (igama lomsebenzisi) / useto lwasekhaya / itemp
Banokucima inani leefayile zethutyana, baye kwikhompyuter yam okanye kwikhompyuter kwaye bavule eyona hard drive, ihlala iyi "C:" kwaye apho bakhangela ifayile ye-.tmp kwi-xp ngokucinezela i-F3 okanye ukukhangela, baya kuthi jonga inani leefayile zethutyana abanokuzicima, ezinye azizukukwazi, kuba zenziwe kwiseshoni, ndiyathemba ukuba oku kuyakuthatha indawo enkulu! USalu2 waseVenezuela!
NAWE UNGAYA KWI-ERRAMENT EBONAKalayo EKUQALISENI EBIZWA NGOKUBA BENZA ISICWANGCISO SOKUBHALA INTO EYA KUNIKEZELWA UKUBHALA OKU LANDELAYO:
KUZA KUVULELWA IFolder eyenzelwe wena apho zonke iifayile zakho ezingabalulekanga zibizwa ngokuba ziifayile zegarbage. BASUSE KULO MGXILO KANYE KE BASUSE KWIZIQINISEKISO ZOKUVUSELELA ITHEMBA NDIYAThemba ukuba liza kukunceda
molweni gentusa. Ndifuna ukukuxelela ukuba andazi ukuba ndiphelisa njani iprototype, ibizwa ngokuba yipeyinti, imalunga nokwenza imizobo kodwa ithatha indawo enkulu. Ndine-200 megasbites zememori kwidiski C:
USifrido Montaner sitsho
ndincede ngoku! Andikwazi ukuvula ipc yam okanye ukudlala ipeyinti ndithumela umbuliso kusapho lwam oluvela kuJujuy! Molo!
Phendula Sifrido Montaner
Ndizikhulule i-1.5 gb
Molo, enkosi kakhulu ngenkcazo yakho, ibilula kakhulu kwaye ngaphandle kokujika, ndiyazikhulula njenge-5 gb.
Inkqubo elungileyo kakhulu 🙂
Enkosi kakhulu, indincede kakhulu kuba bendidinga indawo kwidiski yam kwaye bendingazi ukuba ndenzeni! Undincede kakhulu!
sf sc sitsho
Ndiphumelele u-7 wobuchwephesha kwaye ndifuna ukukhulula indawo kwi-pc yam kwi-drive c kwaye andazi ukuba ndenze njani
Phendula kwi-sf sc